mangataka torohevitra na divorce
Date: 03 mai 2017 - 11:27
Mba mangataka fanampiana tompoko. Lehilahy no manoratra. Ny vadiko mipetraka ao @ rafozako tsy mety miala ao izy hoe hitokantrano. efa roa taona izay no nisaraka fa nanofa trano aho fa tsy mety hanaraka izy. Tsabatsabahan'ny rafozambaviko loatra ny tokantranonay dia izay no nialako moa izay roa koa mifamaly be foana. Raha hametraka divorce aho dia inon no mety atao antony? Dia mila otrinona eo ny vola fikarakarana divorce kay? otrin naheno aho hoe 15 à 30 millions eo ny manao azy na mihoatra akory aza. misaotra indrindra
Re: mangataka torohevitra na divorce
Date: 03 mai 2017 - 11:44
Za vehivavy dia za ku zao manao divorce, f nisy audience 1 lasa ny ahy. Zay nisara-toerana 8 mois, tsisy zaza d tsis harena iraisana. Nampirafy be ilay ex-ko dia nanana porofo betsaka aho natolotro niaraka tamin'ny fangatahako, dia amin;io cas ako io dia vetivety hoy ny avocat-ko, tsy manahirana loatra.
15 millions no alain'ny avocat-ko fa miampy njey raha manao apel mitatra be le ex-ko, zay ny teniny. Afa ny volan'ny huissier manatitra an'ilay taratasy fampiatsona any amin'ilay vadinao.
Date: 03 mai 2017 - 12:07
Tsy tokony handany vola be ny divorce raha ny fahafantarako azy satria tsy misy vola aloha any amin'ny tribunal. (Tsy haiko raha efa niova).
Tamin'ny 2002 izaho no nanao divorce fa ny 400.000 FMG karaman'ny avocat ihany no nalohako. Amin'izay tsy dia misy asany akory izy fa mi-représenter (izaho tsy hifanatrika fa leo mifamaly imason'ny juge) ahy fotsiny satria efa samy te hisaraka izahay tamin'izany.
Tena io probleme rafozana sy havana io ny fototry ny olana.
Ny tena mampihomehy dia nifamerina indray izahay taty aoriana. Nanenjika ny rafozako fa tsy norarahinay intsony.
Ny tiako tenenina dia hoe : mba andramo resahana manokana ihany ny vadinao sao dia hanao ohatranay eo.
Date: 03 mai 2017 - 12:10
tsy mila vola zany eny e, ny olona mihitsy no ratsy saina tonga dia manome vola manantena hoe hovita moramora ra misy vola fa ny avocat sy ny mpiasa eny tsy mitaky vola zany.
matoa arirariran'ny avocat ny cas-nao dia tena ratsy ny cas-nao, du genre hoe enao no tena diso kanefa enao mitaky hoafa-maina na handresy. @zay cas zay tena tsisy fika, dia eo vao ny olona ihany no be fikafika hoe aleo omena vola de hoe hotafa ihany, dia tsy maintsy hikapoka volabe zareo satria tsy possible zany diso zany enao nefa hohafamaina noho ny fahadisoanao manoloana ny lalàna.
Date: 03 mai 2017 - 20:33
Evah> enjana be ny anao izany . vao niresaka tamin groupe resaka tokantrano tao @ facebook fa tsy tokony ho lafo be zany fa 30000ar ny droit @ lay mametraka hono dia refa mivoka ny didy dia mandoha vola kely fanampiny. Entre 80000ar à 150000ar
Date: 03 mai 2017 - 20:37
Temoin> efa tena nisaraka vita divorce mitsy ve nareo roa dia nifamerina indray. Enjana lay fitiavana ka...
Date: 04 mai 2017 - 06:20
smith>> Efa nisaraka 3 mois. Tsapa amin'izay ilay banga.
Ilay fitsabatsabahan'ny fianakaviana amin'ny tokantrano mihitsy anie no miteraka korontana e. Izy 25 ans tamin'izany dia mbola voa-influencer-ny RAD. Ny fitaizana azy koa moa nanampy trotraka.
Fa mila madi-doha manoloana ny rafozana raha tsy izany dia tsizarizary ny tokantrano. Izaho moa dia tsy tian'ny fianakavian-dry zareo mandrak'ity ny androany. Ilay rafozam-bavy tena tsy tia ahy moa efa tsy eo intsony.
Fa izahay kosa dia mahatsiaro sambatra. Izay no itenenako hoe andramo resahina ihany izy raha mbola misy fitiavana.
Date: 04 mai 2017 - 07:33
smith< Lafo lotra kosa ilay 15 millions an!mety antony hafa ngambany no tianao hiaviana dia kapohiny avocat mafy enao e
za aloha nanao divorce fa tsy nihoatra ny Ar 200 000 E niapy frais madinidinika!
raha io cas io no entinao eny dia tokony mahazo gain de cause ianao, tsy mila avocata akory!
soraty fotsiny hoe nanao abandon de foyer ilay vadinao e!satria anie ny domicile du mari no domicile conjugual e!
ny pièce justificative no mila atao maro sy mafonja,ohatra hoe maka taratasy fokotany manamarina!
Date: 04 mai 2017 - 11:51
Izaho manokana mila avocat mi-representer ahy eny amin’ny fitsarana satria aho tsy ao Mada, ary tsy te-hiverina any na hoe hiandry ahy ody any mihintsy vao hanao divorce, tsy olana amiko ny manakarama avocat 15 millions noho izany, na misy ihevitra aza hoe ratsy eh … na hoe izaho no diso eh ... tsy rarahiko satria tsy marina izany ... karamany io dia aloako tsara satria miasa tsara izy, izay koa no nifanarahana na hisy iteny koa ary hoe manararotra ny avocat eh ... efa izay no nifanarahanay … tsy hitako izay olana, io koa mba tsy anahirana ny fianakaviako, izy daholo ny manao ny rehetra. Tsy misy olona miasa maina izany ary tsy marina ny hoe tsy mitaky vola ny eny amin'ny fitsarana, fa na droit ary eny mila aloha.
Smith> Ezaho alamina ihany ny anao fa marina io lazain'i Temoin io. Miala nenina farany fa raha tena tsy mety izy moa inona no azonao atao? Courage eh.
Date: 04 mai 2017 - 13:01
Evah >> ko ra tsy vitan'ny 15million ko ny adalanao ko,
aloavy ny 15million e, nga moa iny misy dikany aminao, hohitanao ny tohin'ny fiainana rehefa vita tsara ny divorce, tsy manozona aho fa mampiomana tsara, mivonona tsara hihatrika ny tena combat manaraka.
Date: 11 septembre 2017 - 14:49
Evah> nisy nanao n'y divorce ko zay tenà afaka atoroko anao raha ilainao
Date: 02 décembre 2017 - 02:34
Mba azonao atoro ahy ve izay nanampy anao tamin'ny divorce raha sitrakao .
Date: 23 janvier 2018 - 14:36
SALAMA B ATORYY AHY AZFD
Date: 27 janvier 2018 - 01:55
ny ahy koa mikorontana fa io resaka rafozana io koa no antony. NY ihay indray maneso, manenjika ary manakalo zanaka @ fanana ny rafozana. Ny ahy aloha , d tsy hay ny tohiny, fa zao aloha, hanaovako sabotage ny rafozana....ohaotra, alefako ny eau chaude ao @ douche (gaspillage be mihitsy ary tsy rarahiko fa le olona io moa multimuillionaire manao bizna piece camion sy vary any faritra Itasy iny), kikisako ny fiaran'i rafozana na koa hanaovako taim bava zay tsy zakany sy mahasosotra azy....
Date: 09 février 2018 - 10:41
mba mila ny contact an io mpikarakara divorce io azafady oo